‘नेकपा एमाले एक नभए दुवै पक्षको भविष्य छैन’ : मनोरथ भण्डारी — Purbicommand
‘नेकपा एमाले एक नभए दुवै पक्षको भविष्य छैन’ : मनोरथ भण्डारी
२०७७ चैत्र ४, बुधबार ०४:०५ गते
मनोरथ भण्डारी, तत्कालीन नेकपा एमाले उर्लाबारी गाउँ कमिटीका अध्यक्ष हुन् । युवासंघबाट राजनीति सुरू गरेका भण्डारी पार्टीको गाउँ कमिटी सचिव, क्षेत्रीय सदस्य हुँदै सो पदमा पुगेका थिए । राज्य पुनःसंरचनासँगै उर्लाबारी र राजघाट गाविस तथा मधुमल्ला गाविसका केही वडा मिलेर उर्लाबारी नगरपालिका बनेपछि एमाले जिल्ला कमिटीले अग्निप्रसाद भट्टराईलाई नगर कमिटी संयोजक बनायो । त्यसपछि भण्डारी पार्टीको नगर कमिटीको सचिवालय सदस्य भएर काम गरे । पार्टी एकीकरणपछि पनि नेकपाको नगर सचिवालय सदस्य रहेका भण्डारीसँग एमाले व्युँतिएपछि समसामयिक विषयमा पत्रकार नवराज भट्टराईले गरेको कुराकानी :
सर्वोच्च अदालतले एमाले व्युँताइदियो नि, कस्तो अनुभव भएको छ ?
– एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेपछि जनताले ठूलो आशा र अपेक्षा गरेका थिए । धेरै उत्साह छाएको थियो । दुई पार्टी जुन उद्देश्यका साथ एकता भएका थिए यसले सार्थक परिणाम दिन सकेन । विशेषतः मूख्य नेताहरू सरकार र पार्टी नेतृत्वकै होडमा चले, शक्तिकेन्द्रीत हुन लालायित भए । दुई समूहको विवाद सर्वोच्चमा पुगेर पहिलेकै दुई पार्टी व्युँतिएको छ । एक हिसाबले यो दुःखदायी हो, ऋषि कट्टेलले माग गरेकोभन्दा बढी सर्वोच्चले फैसला गरिदियो । विवशताका साथ पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरू आ–आफ्नो घर फर्किनु पर्ने बाध्यता भएको छ । यसले आम कार्यकर्ताले राखेको आशा र अपेक्षालाई तुषारापात गर्ने काम भएको छ । यो आफैंमा दुःखद कुरा हो, तर जे भएपनि दुई पार्टी आ–आफ्नो सांगठानिक पार्टी संरचनामा लाग्नु पर्ने अवस्था आएको छ । ठूलो दल बनेर अन्य साना दललाई समाहित गर्दै लानु पर्नेमा यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन ।
उर्लाबारीमा नेकपा एमालेको बोर्ड राख्ने कार्यक्रम माधव नेपाल समूहले बहिष्कार गरेको हो ?
– यहाँ पनि विभेद गरियो । तत्कालीन नेकपा एमालेको उर्लाबारी गाउँ कमिटीको अध्यक्ष म हुँ । राज्य पुनः संरचनापछि जिल्ला कमिटीले जिल्ला सदस्य अग्नि भट्टराईलाई संयोजक तोक्यो । दुई पार्टी एक भएर नेकपा बनेपछि त्यो कमिटी विघटन भई उमाकान्त गौतमलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो । नेकपा एमाले व्युँतिएपछिको संयोजक त अग्नि भट्टराई हुनुहुन्छ नि ! तर यहाँ गौतमको कमिटीलाई निरन्तरता दिइएको छ, यो विधिसम्मत् छैन । अर्कोकुरा जुन दिन पार्टी कार्यालयमा बोर्ड राख्ने कार्यक्रम थियो, गौतम आफैं र कार्यालयका कर्मचारीमार्फत फोन गरेर कार्यकर्तासम्मलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो । तर, हामीलाई आधिकारिक रुपमा जानकारी भएन । म गाउँ कमिटी अध्यक्ष भइसकेको मान्छे फोन गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि ! आधिकारिक जानकारी नभएकाले कार्यक्रममा सहभागी हुन सकेनौं ।
भनेपछि एमालेको केन्द्रको विवाद स्थानीय तहसम्म फैलियो ?
– यसो हुनुहुने थिएन । नेतृत्वले संयमित भएर एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्छ चाहे केन्द्र होस् या स्थानीय तह । यो हाम्रो मान्यता हो । नेतृत्वले सबै साथीहरूको भावना, धारणा बुझेर अघि बढेर विवादलाई समाधान गर्नुपर्छ । यसरी नै अघि बढ्ने, विधिभन्दा बाहिर रहेर काम गर्ने हो भने विवाद फैलिने सम्भावना छ ।
विवाद समाधानको विकल्प के त ?
– पार्टी नेतृत्वले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबैलाई सम्मान गरेर नयाँ शिराबाट जाने, पार्टीको बैठक बसेर सर्वसम्मत निर्णय गरी कामको बाँडफाँट गर्ने, सबैलाई सम्मान गरेर जाने, पहिलेका सबै कुरा बिर्सिने, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्ने हो भने पार्टी एक भएर अघि बढ्छ । नत्र दुवै पक्षको भविष्य देखिँदैन । अतः मिल्नुको विकल्प म देख्दिँन ।
विवादका बीच पार्टी एक हुन्छ भन्ने तपाईँको भनाई ?
– हो, मिलेर अघि बढ्नु पर्छ । यो आम कार्यकर्ताको भावना र राष्ट्रको आवश्यकता हो । यसलाई पार्टी नेतृत्वले कुठाराघात गर्नु हुँदैन । विश्वासका साथ अघि बढ्नु पर्छ ।